ပုံ - ကလော်ဒီယို vlvarez
ကျွန်ုပ်တို့လူသားအပါအ ၀ င်အပင်များနှင့်သတ္တဝါများသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ တစ်ခါတစ်ရံသန်းပေါင်းများစွာလိုအပ်သည်။ လက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကြောင့်အချို့သည်ဆmass္ဌမမြောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးသုဉ်းမှုဟုခေါ်ပြီးသောအရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
များစွာသောတိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်မျိုးစိတ်များသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး / သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ခြေရှိသည်။ ရာစုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာမြေကြီးသည်တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ရန်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်းဆက်ရှိနေမည်ဆိုလျှင် BBVA Foundation Frontiers of Knowledge ဆုရရှိထားသောဂေဟဗေဒပညာရှင် Marten Scheffer က အင်တာဗျူး ဘာ "ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူနေစရာနေရာအသစ်တွေလိုအပ်လာလိမ့်မယ်"။
ကမ္ဘာမြေသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမလိုအပ်ပါ။ တကယ်လို့များငါတို့မျိုးသုဉ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကနောက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားဂြိုလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုနီများမတိုင်မီအထိအနည်းဆုံးတော့သူမလိုအပ်သည်။ ယင်းသို့မဖြစ်မှီအထိပင်လယ်ရေသည်အက်စစ်ဓာတ်များလာသည်နှင့်အမျှအပူပိုင်းဒေသသစ်တောများသည်မျိုးစိတ်များပြတ်လပ်သွားသည်နှင့်အမျှသန္တာကျောက်တန်းများမည်သို့သွေးထွက်။ သေဆုံးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ Scheffer ကသစ်ပင်များသည်ဒေသအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ထွန်းသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုများအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားသောအခါ၎င်းသည်ပြadaptနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဘဝ၏လိုက်လျောညီထွေရှိမှုစွမ်းရည်ကိုရှယ်ယာဖြစ်ပါတယ်.
သင်၌တစ်နှစ်လျှင်မိုးရေချိန် ၁၅၀၀ မီလီမီတာမနည်းသောအပူပိုင်းသစ်တောမရှိနိုင်ပါ၊ သို့သော် ဆက်လက်၍ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုလုံလောက်စွာအသုံးချခြင်းမရှိပါကသင်၌သစ်တောပြုန်းတီးမှုမရှိနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသောလူများအတွက်အစားအစာထုတ်လုပ်ရန်လက်ရှိအခြေအနေမှာသစ်တောပြုန်းတီးမှုသာမကဘဲအပင်များကိုမြေဆီလွှာကိုပျက်စီးစေသည့်ဒြပ်ထုတ်ကုန်များဖြင့်ကုသပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်စကားမစပ်၊ သူတို့သည်အပင်များကိုအားနည်းစေခြင်း (ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ) ။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်လူသားများစွာသည်လက်နက်ကိုင်ပconflictsိပက္ခများ၊ အငတ်ဘေးနှင့်ရေပြတ်လပ်မှုများနှင့်နေရာများစွာတွင်ရင်ဆိုင်ရသည်။ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုမှာလူ ဦး ရေအလွန်များပြားသောဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုရှာဖွေရန်ပြောင်းရွှေ့လာသူများကိုပြောင်းရွှေ့ရန်ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းရွှေ့အခြေချရန်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်
မိုlife်းတိမ်၌အသက်ရှိသလော ဟုတ်ကဲ့! မဟန်လိုရင်တောင်မှ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် G20 Paris သဘောတူညီချက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်